China Chrome Plated Corrugating Roll နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း Tungsten Carbide Corrugating Roll စက်ရုံ
ဖေါ်ပြချက်:Corrugating Rolls,Chrome သုတ်သင်လိပ်,Tungsten Carbide Corrugating Roll,စက်မှုလုပ်ငန်း Corrugating Rolls,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Corrugating Rolls
Corrugating Rolls ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Corrugating Rolls, Chrome သုတ်သင်လိပ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Tungsten Carbide Corrugating Roll R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တစ်ခုတည်း facer စက်များအတွက်ကော်လျှောက်ထားလိပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူပျို Facer သည်ကော်လိပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်ဖိအားပေးစက်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုတည်း facer စက်များအတွက်ဖိအားလိပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chrome Plated သို့မဟုတ် Tungsten Carbide Corrugated Roll  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
48CrMo 50 CrMo Tungsten Carbide Corrugated Roller  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tungsten Carbide Corrugated Roller  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hard Chrome Corrugated Roller  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ABCEF Flute Corrugating Roll  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုတည်းသော Facer စက်အတွက် Chrome Flute Corrugating Roll  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Flute ကိုထုတ်လုပ်ရန် Chrome Plated Corrugating Roll  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tungsten Carbide Corrugating Roll / Roller  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူပျို facer A / B / C / D / E Flute သည်သွပ်သွင်းစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက် Fosber BHS ကတ်ထူပြားသွပ်သွင်းစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chrome သွပ်ကြိတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Corrugation အတွက် Chrome Plated Rollers  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုတည်း facer စက်များအတွက်ကော်လျှောက်ထားလိပ်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 3100 / Piece/Pieces
Glue Roll ၏ဖော်ပြချက်: ပစ္စည်း: SC45 ချောမွေ့သောသံမဏိပြွန် ကွက်၏အရွယ်အစား: ခွက် ခုံးပန်းပွင့်: 0.8mm; 1.0mm; 1.2mm; 1.4mm; 1.6mm ခွက်ပန်းပွင့်: 1.0mm ； 1.5mm; ၂.၀ မီလီမီတာ spec ။ : φ 50- φ 800mm * L100 ～ 5000 MM ဖြောင့်မှန်ကန်မှု:...
လူပျို Facer သည်ကော်လိပ်
Glue Roll ၏ဖော်ပြချက်: ကော်သည်လိမ်းထားသောကာဗွန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမတူညီသောအချိုမှုန့်ပုလွေပရိုဖိုင်းများနှင့်လည်ချောင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ လိပ်၏မျက်နှာပြင်သည်ခရိုမီယမ် (electroplated)...
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်ဖိအားပေးစက်များ
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်ဖိအားပေးစက်များ pressure roll ers အကြောင်းဖော်ပြချက် ပစ္စည်း: SC45 ချောမွေ့သောသံမဏိပြွန် ဖြောင့်မှန်ကန်မှု: ထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်φ 0.02MM မှတူညီ မြို့ပတ်ထွက်ပြေးမှု - ၀.၀၂ မီလီမီတာထက်နည်းသည်သို့မဟုတ်ညီသည်...
တစ်ခုတည်း facer စက်များအတွက်ဖိအားလိပ်
လူပျို Facer များအတွက်ဖိအား Roll pressure roll အကြောင်းဖော်ပြချက် ဖိအားသည်လိပ်ကိုအပေါ်သို့သွပ်အထက်အမြှောက်အောက်တွင်တည်ရှိပြီးအပေါ်နှင့်အောက်အမြှောက်တွန်းစက်များနှင့်၎င်း၏ ၀ င်ရိုးတန်းသည်လေယာဉ်ပေါ်တွင်ရှိသည်။...
Chrome Plated သို့မဟုတ် Tungsten Carbide Corrugated Roll
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 15000 / Piece/Pieces
Chrome Plated သို့မဟုတ် Tungsten Carbide Corrugating Roll ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Corrugating Rolls သည်အရည်အသွေးနှင့်စီးပွါးရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာခြင်းအတွက်အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းဖြစ်သောသက်တမ်းရှည်သည့် Corrugated Cardboard Machine Lines...
48CrMo 50 CrMo Tungsten Carbide Corrugated Roller ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: ၄ င်းတို့၏ ပွန်းပဲ့မှုခံနိုင်မှုနှင့် ၀...
Tungsten Carbide Corrugated Roller ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: တစ်ခုတည်းသော Facer စက်၏ Tungsten Carbide Corrugated Roller များသည် အလွန်အမင်းအကျိုးရှိပြီးအလိုအလျှောက် Corrugation Machine Lines...
Hard Chrome Corrugated Roller ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Hard Chrome Corrugated Roller၊ Chrome Plated Corrugating Roll သည်အလယ်အလတ်မြန်နှုန်း Single Facer နှင့် manual Corrugating Production Lines များအတွက်သင့်လျော်သည်။...
A, B, C, E, F, Flute Corrugating Roll ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: A, B, C, E, F Flute Corrugated Roller ကို Corrugating Rolls တွင်ပလွေအမျိုးအစားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။...
တစ်ခုတည်းသော Facer စက်အတွက် Chrome Flute Corrugating Roll
တစ်ခုတည်းသော Facer စက်အတွက် Chrome Flute Roll ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Single Facer စက်အတွက် Chrome Flute Roll သည်အလတ်စားမြန်နှုန်း Single Facer နှင့်လက်စွဲ Corrugator အပင်များအတွက်အဓိကသင့်တော်သည်။ အ မြင့်တိကျသောအဖြိုက်နက် Carbide Corrugating Roll နှင့်...
Flute ကိုထုတ်လုပ်ရန် Chrome Plated Corrugating Roll ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Chrome Plated Corrugating Roll သည်အဓိကအားအလယ်အလတ်မြန်နှုန်း Single Facer နှင့် manual Corrugation plants အတွက်သင့်တော်သည်။...
Tungsten Carbide Corrugating Roll ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Tungsten Carbide Corrugating Roll - Corrugated Cardboard Machine Lines တစ်ခုအတွက်တစ်ခုတည်းသော Facer အတွက် Corrugation Packaging Industry...
လူပျို facer A / B / C / D / E Flute သည်သွပ်သွင်းစက်
ABCDE ပုလွေ တစ်မျိုးတည်း မြှောင်းပုံ roller ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Corrugating Rolls သည်စက်မှုလုပ်ငန်းသွပ်သွင်းစက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Chrome Plated Corrugating Roll & Tungsten Carbide Corrugating Roll သို့သွယ်တန်းနိုင်သည်။ မြှောင်းပုံကတ်ထူပြား...
စိတ်ကြိုက် Fosber BHS ကတ်ထူပြားသွပ်သွင်းစက်
စိတ်ကြိုက် Fosber BHS ကတ်ထူပြားသွပ်သွင်းစက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Corrugating Rolls: Chrome Plated Corrugating Roll / Tungsten Carbide Corrugating Roll 1. မြှောင်းပုံလိပ်ကိုအရည်အသွေးမြင့်သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။...
Chrome ချထားတဲ့မြှောင်းပုံ roller ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Chrome Plated Corrugated Rollers များသည်အဓိကအားဖြင့်အလတ်စားမြန်သော Corrugated Cardboard Machine Lines များနှင့်လက်ကိုင် Corrugation Plant...
Corrugation အတွက် Chrome Plated Rollers
Corrugation အတွက် Chrome Plated Rollers ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: အလတ်စားမြန်နှုန်းအတွက်အထူးသင့်လျော်သော Corrugation အတွက် Chrome Plated Roller များ၊ Hard Chrome Corrugated Roller များနှင့် Corrugated Cardboard Machine Lines များတစ်ခုတည်း Facer...
တရုတ်နိုင်ငံ Corrugating Rolls ပေးသွင်း
Corrugating Roll သည်သန္ဓေသားကတ်ထူပြားထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်အရည်အသွေးနှင့်တိုင်းတာမှုအတွက်တိုင်းတာသည့်အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းသည်နံရံကပ်ကတ်ထူပြားအတွက်ထုတ်လုပ်သူ၏စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုက်ရိုက်သြဇာသက်ရောက်သည်။ မျက်နှာပြင်အပူကုသမှုနှင့်အအေးကုသမှုသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ကုသမှုပြီးနောက်, ယေဘုယျအားဖြင့် HRC55 အထက်တွင်ရှိသည်။
Huatao သည် Tungsten Carbide Corrugating Roll နှင့် Chrome Corrugating roll များကိုပေးသည်။
မြှောင်းပုံကြိတ်စက်သည်စက်တစ်ခုတည်း၏သော့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Corrugated roller ကို corrugated roller အဖြစ်ခွဲခြားသည်။ အောက်နှင့် corrugating roller အောက်နှင့် roller မျက်နှာပြင်သည်အမျိုးသမီးပုံသဏ္areာန်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခု meshing assembly ဖြစ်သည့် meshing gear transmission ယန္တရားသည်ပုံမှန်နှင့်ကွဲပြားသည်။ မောင်းနှင်သော roller အဖြစ်မြှောင်းပုံလိပ်, အမြန်လျှော့ချမှတဆင့်ဂီယာမော်တာနှင့်အတူရိုးတံမြှောင်းပုံအလှည့်မောင်း။ အပေါ်သို့သွားသော roller သည် roller၊ roller နှင့် roller တို့ကိုမောင်းနှင်သည်။ သွပ်သွင်းထားသောစက္ကူဖြစ်စေရန်၊ သွပ်ပုံသွင်းခြင်းအကြားမြှောင်းပုံလိပ်သည်သွပ်အလိပ်ကိုဖိအားပေးရမည်။ ဒါကြောင့်မြှောင်းပုံကြိတ်စက်အပြင်ဝင်ရိုးပတ်ပတ်လည်ကိုလည်ပတ်စေသည်။ မိုဘိုင်းလိုင်းနှင့်အထက်နှင့်အနိမ့်မြှောင်းပုံဝင်ရိုးတလျှောက်။ ဤရွေ့ကားရွေ့လျားသည့်မြှောင်းပုံ roller ကြီးစွန်းတိုင်အောင်, ဆလင်ဒါ radial ဖိအားမှတဆင့်လျှောက်ထားသည်မြှောင်းပုံ roller ကွက်မျိုးဆက် nip ဖိအား။
Corrugating Rolls Chrome သုတ်သင်လိပ် Tungsten Carbide Corrugating Roll စက်မှုလုပ်ငန်း Corrugating Rolls Corrugating Roller